Ngaba ndimkhanyele uThixo Universe? Yikholwe okanye hayi, lo ngumbuzo obalulekileyo sonke ukuba ucinge. It’s clear in Scripture that eternal life is freely...
ngokuba ngamaKristu, umbuzo ayikho nokuba siza kujongana nesilingo, kodwa njani Siya kusabela xa sisenza. kuLuka 4:1-2, we read about the temptation of Jesus and how...
Kukho izinto ezimbalwa ukuba usikhwezele umsa entliziyweni yam uYesu kufana nokuva maKristu - okanye nayiphi amaKristu - ukwenza efundelwayo ekuhleni ukholo lwabo ngokubhaptizelwa. I think of...
Njani na singamalungisa emehlweni kaThixo? Oku ngokuqinisekileyo kwi intlonipho efanayo apho uKristu obengumoni. Kuba ecinga ngendlela indawo yethu, that he might...